I-Holland | Ngathi
Singuye makhiqizi owaziwayo emhlabeni jikelele weepinki kwaye uyafa.
Impumelelo yokwenyani yokuvelisa yaseBritane, simiselwe iminyaka engama-75. Sisebenzisa la mashumi eminyaka amava, uphando kunye nobunjineli ukwazi ukubonelela ngezisombululo ezichanekileyo kumawakawaka abathengi kumazwe angaphezu kwe-100 kwihlabathi liphela.
Ukuphucula ubomi ngokuphucula imveliso yokuphucula impilo kunye neepilisi zokusindisa ubomi
Ukuqonda okunzulu kwemicimbi yeethebhulethi kunye nendlela yokusombulula ngayo ngesixhobo esifanelekileyo kunye nokugcinwa kwezixhobo
IIMPAWU ZETHU EZINGUNDOQO
Ukuzingca ngento esiyenzayo
Ukunyaniseka kunye nengqibelelo
Iqela lethu lenkonzo yabathengi liyavuya ukunceda.
Inkampani inemvelaphi yayo ukuza kuthi ga ngonyaka we-1910, xa, njengeHolland kunye neBrewill, yamiselwa okokuqala njengenkampani yobunjineli jikelele kunye nokuchwephesha nguMnu I Holland.
Isigqibo senziwa ukugxila kumzi-mveliso wokuchwetheza kwaye ukhula ukusuka ekusebenzeni kwendoda-mbini ukuya kumenzi omkhulu kunye nomthengisi wokusebenzisa izixhobo zethebhulethi emhlabeni.
Inkqubo yokwenza iingcebiso ezikroliweyo zaqaliswa njengesiphumo sentsebenziswano nenkampani yalapha, iGoodacre Engraving.
I-Holland kunye ne-Goodacre Engraving emva koko zaqhutywa kunye phantsi kwebhodi yabalawuli abathathu; UPaul Juffs, uJohn Higton kunye noRaymond Hopcroft. Ngeli xesha I Holland Ltd. iqale ixesha elide kakhulu lokukhula okuzinzileyo nophuhliso. Kuyo yonke le minyaka ilandelayo, ishishini lihlala lityala imali ekuqulunqweni kweenkqubo zokwenza kunye nokuphucula uluhlu lwemveliso kunye nomgangatho.
Ukuphuculwa okungakumbi kwenziwe kwinkqubo yokubhabha, yile yinkqubo apho iinkcukacha zecwecwe lokugqibela zenziwe zaza zacinezelwa kwitheyibhulethi yephuli.
Ezi ziphuculo zaziquka ukwandiswa komthamo we-hobwing hob kunye nokufakelwa kwesityalo soNyango lwe-ICI shushu ukuvelisa iipali ezomeleleyo kwaye zife. Kwakukho novavanyo oluqhekezayo lomhlaba obandayo ekwenzeni iintloko zepunk ezakhokelela ekubeni i-Holland ihambise ipatent yale nkqubo. Inani labasebenzi lenyuke ngaphaya kwe-40 uphawu kwaye ukuthengiswa kwamazwe aphesheya e-Holland kwaqala ukwanda.
I-Holland ithatha umfundi wokuqala, uTrevor Higgins, owamkelwa njengomnye wabaphathi abaphethe kwiThebhulethi yokucinezelwa kwetafile emhlabeni. UTrevor wahamba phantse kuzo zonke izikhundla kwinkampani de waba nguMlawuli we-I Holland, isikhundla awasibamba de kwangowe-2016.
I Holland ndaya kwizakhiwo zayo zangoku eMeadow Lane, eLong Eaton kwaye kwakuloo nyaka mnye ndaboniswa okokuqala kumboniso omkhulu wamayeza, i-Interphex '70, London.
Ngexesha le-5 leminyaka elandelayo, ulwandiso lwesithathu lwakhiwa kwisakhiwo kwaye utyalomali lwenziwe kwinkqubo yokuqala yokusetyenziswa kweekhompyuter, oomatshini abancediswa yikhompyuter, ii-CNC lathes kunye nomatshini wocingo we-EDM.
Inkampani iphumelele ukuvunywa komgangatho we-ISO 9002, yenye yeenkampani zokuqala ukwenza oku.
U-Steve Deakin wonyulwa njengo-Mlawuli, kwaye i-PharmaCare Equipment Division yasekwa ukwanelisa iimfuno ezikhulayo zeemveliso ezinxulumene nokukhathalelwa kwezixhobo zethebhulethi.
Ukuthengwa ngempumelelo kokuphathwa kugqityiwe. Kananjalo ukufunyanwa kwePinder Veratool, inkampani yase-UK eyenza iikhonkwane kunye neekhabhathi zokugcina ukufa, ngoku ezibonelelwa kwihlabathi liphela.
Isemina yearhente yokuqala yenzeka. Ukuphehlelelwa kwe-'Initiative 2000 'yeNkqubo yoBunjineli kwakhona.
I-Holland iqulunqe kwaye yakha indawo yokubukisa entsha kunye nendawo yenkomfa kwikomkhulu labo laseNottingham, eNgilani.
Oku kuvumele ukwanda kweekhosi zoqeqesho ezinikezelwa kubathengi kunye nokusingathwa kweesemina ephumelele kakhulu yeearhente ezingama-40 ze-I Holland ezivela kwihlabathi liphela apho ziye zahlaziywa khona kwitekhnoloji entsha kunye nolutsha. Le semina yabameli ingqineke ithandwa kakhulu kangangokuba ngoku ibanjwa rhoqo.
Kwakukho utyalomali olubalulekileyo kwi-IT kunye nesoftware yoyilo evumela i-Holland ukuba iqhubeke nokucinezela imida yeenkqubo ze-CAD / CAM.
I-2003 yabona iziqhamo ze 'Initiative 2000' kusetyenziswa iirobhothi, oomatshini abazisebenzisayo kunye nolawulo olujolise kuyo. UChris Prideaux wajoyina inkampani njengoMlawuli oLawulayo ongenayo. UDavid Hinds waziswa njengoMlawuli wezeMali.
Ngo-2004, uMike Glove wadla umhlala-phantsi wanikezela ngendawo ye-MD kuChris Prideaux. UDavid Hinds wajoyina iBhodi yaBalawuli njengoMlawuli wezeMali. Ezinye iirobhothi kunye neenkqubo ezizenzekelayo zamiliselwa.
NgoSeptemba 2006, kunye nokuphawula unyaka wama-60 kwishishini, I Holland yabamba enye isemina yearhente. Mna abameli base Holland abavela kwihlabathi liphela bebezimase umsitho weentsuku ezintathu obandakanya iisemina zobuchwephesha, iiseshoni zoqeqesho olusebenzayo kunye notyelelo olubanzi lwezixhobo zokuvelisa apha e-UK.
Kwakukho iisemina zabathengi ezininzi kunye nezifundo zoqeqesho ezazibanjelwe e-UK nakumazwe aphesheya.
Ngomhla ka-Meyi ka-2007 kwaphawulwa ukumiliselwa kwe-I Holland 'yeCompression Tooling Tooling ukusuka ekuqaleni ukuya kugqitywa'. Umsitho ububanjelwe kwisiza i-Holland kwisithuba seentsuku ezimbini, sinika isishwankathelo esipheleleyo sayo yonke inkqubo yeethebhulethi, ukusuka kuyilo lweethebhulethi ukuya kulondolozo kunye nokunakekelwa emva kweenqindi kwaye ziyafa.
Ngo-2008, i-Holland yandise uluhlu lwayo lweeblashe kunye nempahla yokunxiba. Ezi mveliso zaziswa kumboniso we-Interpack eDusseldorf ngo-Epreli.
Ngo-Epreli 2009, I Holland yatshintsha ubunini. Iqela lobunini elitsha ngoku liquka uChris Prideaux (uMlawuli oPhetheyo), uSteve Deakin (uMlawuli woPhuhliso lweShishini) kunye noDavid Hinds (uMlawuli wezeMali). Abanini bangaphambili uPeter Fothergill (Usihlalo) kunye noTrevor Higgins (R&D) bahlala bengabalawuli benkampani.
Ngo-2009 i-Holland nayo yabonisa e-Achema e-Frankfurt, eJamani ngethuba apho i-Holland yasungula i-PharmaCote® RS eyayinempumelelo kakhulu kwaye yabamba iqela eliphumelelayo kakhulu labathengi kunye nee-arhente ezazineqela lase Cuban kunye necocktail! I Holland ikwaqinisekisile ukuzibophelela kwayo ekugqweseni ngokuhlaziya ubume obuvunyiweyo be-BSI kunye nesiqinisekiso sabatyali mali kwaBantu.
I-Holland yayinonyaka werekhodi yokuthengisa izixhobo zamacwecwe kubathengi abaninzi kumazwe amaninzi kunanini na ngaphambili. Njengenxalenye yokuzibophelela ngokuzinzileyo kwinkonzo yabathengi, I Holland yathatha imali enkulu yokutyala imali n kwizibonelelo zamkela abathengi kunye nezixhobo zemveliso. Oku kwenze ukuba i-Holland igcine ukhuphiswano lwamaxesha okukhokela, ngokunyusa umthamo, ukuhambisa eyona nkonzo iphezulu yabathengi kumazwe angaphezu kwama-90 kwihlabathi liphela.
I-Holland isungule inkqubo yayo ye-'Tableting Science Anti-Stick Research (TSAR) kwaye yazisa nge-MF40 punch polisher entsha kwihlabathi eAchema eFrankfurt.
Kwakungunyaka oxakekileyo ku-Holland. UDavid Hinds uthathe indawo kuChris Prideaux njengoMlawuli oLawulayo kwaye uChris waba nguSihlalo kunye noMlawuli ongekho kwiSigqeba kwiBhodi ye-Holland. USteve Deakin uthathe isikhundla esitsha soMlawuli weNkonzo yaBathengi kwiBhodi kwaye uhlala eyinxalenye yeQela eliLawulayo. Nam Holland ndamkele uMlawuli weNtengiso noThengiso omtsha, uJavier Raposo othathe indawo kwiBhodi nakwiQela eliLawulayo.
Mna u-Holland ndibenomboniso ophumeleleyo e-Achema e-Frankfurt, ndityhila i-XDF kunye ne-I Holland Tool Management System, bobabini ngempumelelo enkulu. Uluhlu lweeHollands zoopopayi abatsha lubonisiwe.
Sibhiyozele isikhumbuzo seminyaka engama-70 sase-Holland ngowama-2016! Esi siganeko sibaluleke kakhulu kwinkampani ekwishishini lethu ngenxa yoko ibisisizathu esikhulu sokubhiyozela iiarhente zethu kwiSemina yabameli base-UK nangokusingatha imisitho kwihlabathi liphela.
Ngo-2017 yazisa i-ECxtra kwaye yasungula ne-Holland's Ultimate Guide Seminar. I-2018 yazisa iNutraTool kwaye yaphinda yajonga iAchemia eFrankfurt, eJamani.
I-Holland iyaqhubeka nokuzabalazela imigangatho ephezulu yokugqwesa. Ukuzinikela kwethu kutyalo-mali kubugcisa obutsha bokuvelisa, abantu kunye noqeqesho olupheleleyo. Zonke zinenjongo yokuqinisekisa nokuba ngamanqanaba amakhulu okoneliseka kubathengi bethu, bobabini ngoku nakwiminyaka ezayo.